China SD5K Bulldozer Emeputa na Supplier | Shehwa
SD5K bụ ụdị-ụdị ngụkọta haịdrọlik klọọkụ na isiike isiike kwụsịtụrụ, kọmputa akara EBIONITISM, sọrọ-na-na-na-elektrọnik akara hydrostatic ịnya ụgbọ ala usoro, electric akara mechiri emechi center ibu na-eziga mejuputa haịdrọlik usoro. PowerAngle-Tilting agụba, akpaka akara onwe ha jụrụ jụrụ usoro. Ihe atumatu a bu igwe elekere eletriki nke ike zuru oke, ya na ntughari na agbanwe agbanwe, nhazi uzo na odi mfe idozi na mmezi; igwe eletriki nke na-ejegharị ejegharị na-arụ ọrụ na ngwaọrụ na-arụ ọrụ na-eme ka ọrụ rụọ ọrụ ma dị mma; Ngosiputa ngwa mmekorita mmadu na komputa, ihe omuma ihe omuma ya. Ọ nwere ike na-onwem na atọ shanks ripper. Ọ bụ ezigbo igwe eji arụ ọmarịcha ma ọ bụ ibu dị arọ na-arụ ọrụ dị ka owuwu mmiri, nkwukọrịta nkwukọrịta, ámá egwuregwu, ọrụ eletriki eletriki, obodo na obodo na-akpụ akpụ, imejupụta usoro na ịrụ ọrụ arụ ọrụ.
Ọrụ ọrụ (gụnyere ripper) (Kg): 13100
Nsogbu ala (gụnyere ripper) (KPa): 45
Ihe nlele (mm): 1790
Nkeji nkwụsị ala (mm): 315
Ike ịgba ụra (m): 3.1
Obosara (mm): 3060
Max. Igwu ala omimi (mm): 460
N'ozuzu ya (mm): 492230603000
Gosiri mgbanwe (rpm): 2200
Ike Flywheel (KW / HP): 97/132
Ugboro oriri oriri (g / KWh): 190
:Dị: trackdị egwu nkịtị na-akwụsịtụ
Ọnụ ọgụgụ nke ndị na-ebu ụgbọelu (n'akụkụ ọ bụla): 1
Ẹtop (mm): 190
Max. nrụgide usoro (MPa): 19
Umpdị mgbapụta: Mgbanwe nke na-agbanwe agbanwe pistin
Mmepụta sistemụ L / min: 125
Modularize Otu-ogbo mbara ala + Onye-ogbo spur Mbelata gia usoro
Nke gara aga: SD7K LGP Bulldozer
Osote: SD6K Bulldozer